कथाः फेसबुक कि खडकेनी – Makalukhabar.com
कथाः फेसबुक कि खडकेनी
फलानाको घर बसायो फेसबुकले, फलानाको घर बिगार्यो फेसबुकले । हामीले सुन्ने तर वास्ता नगर्ने मुख्य समाचार नै फेसबुके दुनियाँका समाचार । फेसबुकबाटै लभ परेर पल्ला घरे काइली पोइल हिँडी । फेसबुकमा भाको चक्कर थाहा पाएर सुन्तलीले रनेलाई डिभोर्स हान्दिई ।
माया गर्छुभन्दा पनि हाँसो, हेलाँ गर्छु भन्दा पनि हाँसो । यो कस्तो माया हो हनुमानजी ?
यी र यस्तै कथा हुँदाहुँदै पनि अस्ति बाले भन्नु भो, ‘दीपक ! यी यसमा फेसबुक हाल्दे त ।’
बाले खाउला झैं गरेर भन्नु भो, ‘कमल दाइले फेसबुक चलाएर दुन्याभरका समाचार पढ्नुन्च । म चै यै थोत्रे रेडियोको भर पर्नुपर्ने । खुरुक्क आजै फेसबुक चल्ने बनाइदे ।’
आफूभन्दा मान्यजन अगाडि नहुँदासम्म म मोबाइलमा फेसबुक खोलेरै बस्छु । दुइटा बुढी औंलाको सहारामा हजारौं पटक मोबाइलको स्क्रीन स्क्रोल गर्छु– केही नयाँ छ कि भन्दै । म जस्तै फेसबुकको किरो छ खेमराज घिमिरे भन्ने । उसले जिस्काउँदै भन्छ, ‘ओए ठुले तेरा बुढी औंलाका रेखा मेटिए होलान् मोबाइल चलाउँदा चलाउँदा ।’
फेसबुकका बारेमा फ्वाँसे कुरा पढ्दा बोर लाग्यो ! साँच्ची मैले मेरै कुरा गर्दैछु । बोर मान्नु पर्दैन । म पनि तारा भाइजस्तै फेसबुकलाई समय कटाउने माध्यम ठान्दछु ।
आज उनैले आफै हेल्लो सर भनेपछि मैले सबै काम एकातिर मिल्काएर उनको पछि लागें । ‘ओ माई गड १ फिलिङ खुसी ।’ मैले रिप्लाई गरें ।
संजोग भाइको जस्तै प्रश्न धेरैको छ । मिनराज भाटले भने, ‘राजा मुन्टो दुख्दैन ! जतिबेला पनि मोबाइलमा हेरेको देख्छु । को सँग हो यसरी च्याटमा ?’
अँ यता फेसबुके कुरा गर्दा गर्दै उता खड्केनीको म्यासेज ट्वाँङ्ग गर्यो । हेरें, ‘खाजा भयो ?’
अब कस्ले बनाएर दिन्छ र खाजा खानु रु यस्तै भन्न मन थियो तर भनिनँ ।
मौकामा चौका हान्न मन लाग्यो, ‘कथा मात्र दामी कि मान्छे पनि रु’ पढेर उनी हाँसिन् ।
एकछिन कथाका कुरा भए । उनलाई मन पर्ने मेरो कथा भनिन् । मैले धन्यवाद भनें । हल्का रोमान्टिक मुडमा थिएँ म । सायद उनी पनि । च्याटले बताउँदै थियो । झ्याप्पो टाइप गर्दिएँ ‘मोटी आई लभ यु १’ सँगै दुइटा लभको सिंग्नल रातो पानपाते पनि पठाइदिएँ ।
फेसबुकको दुरुपयोग भयो भनौं भने यो सबैभन्दा गलत होला । सदुपयोग भयो भनौं भने यी मेरो हाल यस्तो छ । बुढेसकालमा चक्कर चलाउँदैछु ।
सरकार, हामीलाई सुधार ।